जापानी भाषा सिक्दा हुने तीन ठूला गल्ती | Nepali In Japan
Sunday, October 24जापानबारे सबै कुरा
जापानी भाषा सिक्दा हुने तीन ठूला गल्ती
March 6, 2019 June 30, 2021
जापानी पढ्न निकै कठिन हुन्छ र यसमा माष्टर बन्ने कुरा त करीब करीब असम्भव नै छ । यो कुरा हामीले धेरै पटक सुनिसकेका छौं । जापानी भाषा आफ्नो राष्ट्रिय भाषा नहुनेहरुले कसरी संवाद गर्छन् ?
यहाँ आधा जापानी, जापानीसँग विवाहित वा थुप्रै वर्ष जापान बसिसकेर पनि जापानी भाषा नआउने थुप्रै विदेशीहरु छन् । तीनलाई बेशिक भाषा पनि नआउने हुन सक्छ । विदेशी भाषाको सिकाईमा धेरै तत्वहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । आजको लेखमा जापानी भाषा सिक्न संघर्षरत विद्यार्थीले गर्ने तीन प्रमुख गल्तीका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।
विद्यार्थीहरु भाषा सिक्नुको प्रमुख लक्ष्य विर्सिएर जानी नजानी अनुवादक बन्छन् । पहिला उनीहरु आफूले भन्न चाहेको कुरा सोच्छन् र अनुबाद गर्छन। हरेक शब्द उनीहरु अनुवाद गर्नतिर लाग्छन् । शुरुमा यो अनुवाद प्रणाली विर्सिएर आफूले सिकेका वाक्य र शब्दको प्रयोग गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाइसँग भन्न खोजेका कुरा धेरै तर व्यक्त गर्नका लागि भने ज्ञानको दायरा सिमित हुन सक्छ । यसका लागि धैर्य र लामो समयसम्मको धैर्यताको आवश्यकता पर्छ । शुरु शुरुमा तपाइले जापानी भाषामा कुराहरु फर्काउन सक्नुहुन्न । त्यसैले साधारण र बेशिक संरचनामा बढी केन्द्रित रहनुपर्छ । एकदिनमै पूरै शब्दकोष नै सिक्ने असम्भव कोशिश गर्नुभन्दा विस्तारै विस्तारै अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।
२. सांस्कृतिक अज्ञानता
भाषा र संस्कृतिबीचको गहिरो सम्बन्धबारे मानिसहरु सजग हुँदा हुँदै पनि केही थोरैले मात्रै यस तथ्यालाई वास्तविकतामा प्रयोग गर्न सक्छन् । उनीहरुले आफूले सबै कुरा बुझेको ठान्छन् तर एउटा कुरा के हो भने तपाइलाई केही पनि थाहा छैन । तपाइले यो कुरा बुझ्नेवित्तिकै तपाइ सुधारतर्फको एक कदम नजिक पुग्नुहुनेछ । भाषा संगसंगै भाषागत संस्कृति, प्रस्तुतिकरणजस्ता कुराहरुमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
भावना देखाउनु र भावनाको वयान गर्नु दुई अलग अलग कुरा हुन् र यी दुवै गर्न कठिन भएपनि महत्वपूर्ण छन् । यदि तपाइलाई कसैले घरमा बोलाउँछ र तपाइ त्यहाँ जाँदा चिया प्रस्ताव राख्छ भने जतिसुकै कप चिया तपाइले पिइसक्नुभएको छ भने पनि त्यस प्रस्तावलाई नाइ भन्नु हुँदैन । चियाको प्रस्ताव राख्दा उनीहरु ओच्या वा इखागादेस्का? ( お茶はいかがですか?) भनेर सोध्छन् ।तपाइलाई चिया मनपर्दैन भने पनि त्यसलाई ‘हाइ’ अर्थात ‘हुन्छ’ भनेर स्विकार गर्नुपर्छ । सधैं इमान्दार बन्नु सधैं राम्रो नीति होइन भन्ने बारे यसले बुझाउँछ । भाषा सिक्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुभयो भने पक्कै पनि भाषा सुधार्न गाह्रो छैन ।
Prevटोकियोमा यति धेरै जनसंख्याको व्यवस्थापन कसरी भैरहेको छ ?
Nextथाहा पाइराख्नुस् जापानमा फोटोग्राफी टिप्स (भाग १)